Bichar - Setopati | Setopati - Nepal's Digital Newspaper
To: आउने १५ वर्षका लागि कांग्रेसको भिजन चाहियाे
विश्वप्रकाश शर्मा - ७ माघ ०७४ भित्र तीनतहको निर्वाचन हामीले सम्पन्न गर्नुछ । त्यसका लागि मधेस मुद्दालाई थप सम्बोधन गरेर वातावरण सहज गराउनुपर्ने दायित्व हामीमा छ । एकातर्फ मधेसी मोर्चालाई मनाउनै पर्ने, अर्कातर्फ नेकपा एमालेलाई संविधान संशोधन लगायतका विषयमा विश्वासमा लिनैपर्ने दोहोरो चुनौती छ। संशोधन नभई चुनाव हुन नदिने मोर्चाको चर्काे स्वर र संशोधन प्रकृया अघि बढ्नै नदिने एमालेको अर्काे चर्काे स्वर बीचमा देशले कांग्रेसको स्वर सानो सुनिरहेको छ। दुई आवेगबीच समन्वय गर्न बसेको भद्र आवाज सानो नै सुनिन्छ। राजविराज घटनापछि त्यो सानो स्वरको सान्दर्भिकता झनै बढेको छ। त्यो सानो स्वर जनजनको मनमा पुग्न थालेको छ। निर्वाचनमा जाँदै गर्दा सहिष्णुतापूर्वक समन्वय गरिरहेको त्यो स्वरलाई मात्रात्मक रुपमा उचो बनाउँदै शालिन आक्रामकतासाथ अघि बढाउनुपर्छ। यसका लागि निम्न काम एकसाथ गर्न जरुरी छ–
मैले आफ्नो जिन्दगीसँग खेलवाड गरेँ- मनीषा कोइराला
मनीषा कोइराला - एउटी नेपाली केटी भएर पनि म भारतको फिल्म उद्योगमा लोकप्रिय र सफल अभिनेत्रीका रूपमा स्थापित भएँ। पाँचवटा भाषाका लगभग ८० वटा फिल्ममा काम गरेँ। थुप्रै अवार्ड जितेँ। जिन्दगीमा ती सबै चिज हासिल गरेँ, जुन हासिल गर्छु भनी सोचेकी थिएँ। तर, ती आकर्षक र सुन्दर पलहरू बाँचिरहँदा मलाई थाहा थिएन, जिन्दगीले मेरो निम्ति अर्कै केही सोचेको छ। मलाई यस्तो मोडमा ल्याएर खडा गर्दैछ, जहाँ विगतका ती आकर्षक र सुन्दर पलहरू म विस्तारै–विस्तारै गुमाउन थाल्नेछु। Comments
सरकारले अाइजिपी छान्न पाउने कि नपाउने
अमित ढकाल - चन्द अब्बल पुलिस अफिसर हुन् भन्ने मैले कहिल्यै पनि सुनिनँ। सायद त्यस्तो कसैले पनि सुनेको छैन। सिनियरदेखि जुनियर धेरै प्रहरी अधिकृतबाट सुन्दै आएको कुरा एउटै छ- आचरणको स्वच्छताका हिसाबले डिआइजी प्रकाश अर्याल एक नम्बर हुन्। सबैलाई ‘मिलाउने’ हिसाबले चन्द एक नम्बर हुन्। आचरण, मिलाउने र कार्यदक्षता सबैलाई हेर्ने हो भने सिलवाल एक नम्बर हुन्। हामी सामान्य मानिसले जे सुनेको छौं, त्यो शेरबहादुर देउवाले नसुनेको हुनै सक्दैन। Comments
आइजिपी नियुक्तिको फैसला अन्य नियुक्तिमा पनि नजिर
बलराम केसी - आउँदा दिनमा आइजिपी बनाउँदा होस् या न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा, सरकारका सचिव बनाउँदा होस् वा अन्य निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा, निर्णयकर्ताले आधार र कारण खुलाउनैपर्ने भएको छ। त्यसैले, यो सरकार वा निर्णयकर्ताको स्वैच्छाचारिता नियन्त्रण गर्ने गज्जबको फैसला हो।
गिरिजाप्रसाद कोइराला र मधेस आन्दोलन
तुलानारायण साह - ‘गिरिजाबाबु बडो स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो – तपाईँलाई मन परोस वा नपरोस् तर आन्दोलन उठिसक्यो भने त्यसमा उठेको एजेण्डाको सम्बोधन हुनुपर्छ। वार्तामा सबै पक्षले केही न केही पाएको महशुश गर्नुपर्छ । .......वश, गिरिजाबाबुको त्यही बटमलाइनलाई टेकेर ८ बुँदे सहमतिको ड्राफ्ट तयार भएको थियो।’ विस्तृतमा
मधेशलाई काठमाडौंको माफीपत्र
मिलन पाण्डे - संविधान संशोधनसँगै २-४ सिट धेरै मधेशले पाउला। २-३ जना मुख्यमन्त्री होलान्। तर, समाधान त्यो होइन। समाधान त, मैले तपाईंको धोतीको आत्मसम्मान रक्षा गर्नु नै हो। समाधान त तपाईंले मेरो टोपीको आत्मसम्मान रक्षा गर्नु नै हो।
कश्मिरको बाटो– भाग २
अमित ढकाल - सत्ताबाट ओर्लिनुपरेको प्रतिशोधमा एमालेको ऊर्जाले नकारात्मक मोड धेरै लियो कि भन्ने लाग्छ मलाई। एमालेले थामिएर आफैंलाई हेरोस्, समीक्षा गरोस्। आज पनि यो मुलुकको सबैभन्दा तेजिलो पार्टी हो एमाले। सबैभन्दा चुस्त संगठन छ। खट्ने र दुःख गर्ने कार्यकर्ता मुलुकभर छन्। नाकाबन्दी बेला भारतसँग नझुकेको जस छ एमालेसँग। चीनसँग दुरगामी महत्वका सम्झौता र समझदारी अघि बढाएको जस छ। भारतसँग शिर नझुकाई उभिएका केपी ओली अझै यसको नेतृत्वमा छन्। मुलुकमा आन्तरिक एकता सुदृढ पारेर समृद्धिको उडान भर्न पखेटा तन्काउनुको साटो भुइँमा लड्न नंग्रा तिखार्न किन अभिषप्त छ एमाले। उसले यसको आफैं समीक्षा गरोस्।
'आधी आकाश' चाहनेहरूले
पारिजात - जतिसुकै संकीर्ण बन्ने वातावरणको काँडेबार हालेर धेरैपछि हामीमा संकीर्ण दृष्टिकोणको प्रादुर्भाव हुनु कुनै अस्वाभाविक होइन। तर, अब परिवर्तनकारी इतिहास अघि बढिसकेको छ। त्यसैले, जान्ने सुन्नेहरूको मौनता एकदमै सामयिक ठहरिँदैन।
कश्मिरको बाटो - भाग १
अमित ढकाल - यो मुलुकमा चुनाव नै हुन दिन्नौं भन्ने मोर्चाको अतिवादले जित्न सम्भव छैन। प्रश्न भनेको, मुलुक दुई नम्बर प्रदेशलाई साथै लिएर चुनावमा जान्छ कि, आवश्यक पर्यो भने दुई नम्बर प्रदेशलाई थाती राखेर चुनावमा जान्छ भन्ने मात्र हो। दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव हुन नदिन मोर्चा सफल भयो भने त्यसले त्यो प्रदेशलाई दुर्भाग्यवश कश्मिरको बाटोमा लैजाने छ। कहिल्यै समाधान नहुने ध्वंश र अस्थिरताको बाटो।
वैकल्पिक धारको राजनीतिबारे
जीवन क्षेत्री - फरक किसिम वा धारको राजनैतिक अभियानमा यस अघि होमिइसकेका र अहिले होमिने घोषणा गरेका सबै साथीहरुमा मेरो शुभकामना छ र एउटा सुझाव पनिः जुन दिन वैकल्पिक धारको राजनीतिले सुशासन र समृद्धिको सपना मात्र नभई वर्तमानमा त्यसका लागि आवश्यक धरातल बनाउन अपजस र अलोकप्रियताको जोखिम मोलेर पनि हाम्रो समयका संगीन, अनुत्तरित र लामो समयदेखि गुजुल्टिएर बसेका प्रश्नहरुको धैर्यतापूर्वक जवाफ खोज्छ, त्यसै दिन नेपाली राजनीति र समाज फरक युगमा प्रवेश गर्छ । त्यो काम पक्कै सजिलो छैन तर सजिलो काम मात्र गरेका भए गान्धी र मण्डेला त्यो उचाइमा पुग्ने थिएनन् जहाँ उनीहरु पुगे । वैकल्पिक धारको राजनीतिको लक्ष्य अहिले काँग्रेस–एमाले–माओवादीले गरेको राजनीतिभन्दा राम्रो बन्ने भएर पुग्दैन, गान्धी र मण्डेला झैं समाजलाई ज्यूँदो र गतिशील बनाउने हुनुपर्छ, मेरो भन्नु यत्ति नै हो ।
आक्रोशको युग र नेपाल
हरि शर्मा - हामी समाज परिवर्तन, सामाजिक दायित्व र सामूहिकताको कामना गर्छौं। तर ऐतिहासिक विकासक्रम र पुँजीवादी बजार व्यवस्थाले हामीलाई व्यक्तिवादी बनाएको छ। सायद त्यसैकारण हामी सुन्दर सामूहिक भविष्य निर्माण गर्ने र शिक्षा व्यवस्था सुधार्ने कुरा गर्छौं, तर छोराछोरीचाहिँ पढ्न विदेश पठाउँछौं। उतै पढेर राम्रो, विदेशी जागिर खाए झन् राम्रो भन्ने हाम्रो सोच छ। हाम्रो सामूहिक सम्पन्नताको कुरा खिया लागेको इन्जिनजस्तो भएको छ। सार्वजनिक स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ बढी मुखरित छ।
राजनीतिमा होमिन बिबीसीबाट राजीनामा
रवीन्द्र मिश्र - मैले शुरू गर्न आँटेको राजनीतिक यात्रामा त्यो विश्वास, स्नेह र सहयोग अनि हाल गृहकार्यमा संलग्न साथीहरूले दिएको प्रेरणा र शक्तिले अत्यन्तै ठूलो ऊर्जा प्रदान गरेको छ। कतिपय शुभेच्छुकहरूले हाल विद्यमान कुनै पार्टीमार्फत नै राजनीतिकरूपमा अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुने सल्लाह नदिएका होइनन्। तर विद्दयमान पार्टीहरूमार्फत अगाडि बढ्ने हो भने “आफू बदलिने तर समग्र देश नबन्ने” निष्कर्षमा पुगेका कारण मैले यो अलग र चुनौतिपूर्ण बाटो चयन गरेको हुँ।
पोखरादेखि बागी औँलाहरू
नारायण वाग्ले - लोकतन्त्र बलियो बनाउन त राजनीतिक दलहरूको स्वार्थघेरा बाहिर बौद्धिक समुदाय चाहिन्छ। बौद्धिक विपक्ष विश्वविद्यालयहरूबाट तयार हुन्छ। त्यसका लागि विश्वविद्यालय स्वायत्त हुनुपर्छ र त्यसको नेतृत्व बौद्धिक हुनुपर्छ। त्यसमा अर्को एउटा बुँदा पनि थपे गुहाले। भने, ‘बहुलतावादको सम्मान गर्ने परिवेश हुनुपर्छ।’
एमाले र मधेसी दलको जिम्मेवारी
सम्पादकीय - मधेसी पार्टीलाई अहिले चुनाव रोकेर संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया रोक्दा आफूले भनेजस्तो संघीयतासहितको संविधान आउला भन्ने लागेको होला। तर, चुनाव रोक्ने र संविधान कार्यान्वयन रोक्ने कुराले भोलि मधेसी मोर्चाले भनेजस्तो संविधान आउने कुनै ग्यारेन्टी गर्दैन। बरु संविधानमा रहेका संघीयता लगायत परिवर्तनका एजेन्डा नै धरापमा पर्ने खतरा हुन्छ।
तेह्र सय वर्ष लामो नेपाली अर्थतन्त्रको 'हेलिकप्टर यात्रा'
विश्व पौडेल - तिब्बत र भारतसँगको सम्पर्क तोड्न नसकेका भए गोर्खाजस्तो गरिब राज्यका राजा पृथ्वीनारायणले सिंगो नेपालको एकमात्र आर्थिकशक्ति काठमाडौंलाई सायदै हराउन सक्ने थिए। त्यत्रो नाकाबन्दीबीच पनि कीर्तिपुर र काठमाडौंलाई हराउन गोर्खाली फौजले झेल्नुपरेको सकसले यही दर्शाउँछ।
मल्ल राजाहरुका लाख दोष हुँदा हुन्, तर उनीहरु नै कायम रहँदै गएका भए मुलुकमा जनताले पढ्न हुँदैन भन्नेजस्तो हदसम्म नेपाल पुग्दैनथ्यो कि भन्ने देखिन्छ। शाह वंशसँग मल्ल वंश साट्दा कामुक, रिसाहा, अल्पजीवि, संकिर्ण राजाहरुसँग सभ्य सुसंस्कृत राजाहरु साटिए भनेर भन्न कुनै अप्ठेरो मान्नुपर्दैन।
वन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बनाउने नै हो त?
- नवराज चापागाईं - वन क्षेत्रका अधिकांश सरोकारवालाको नियत सफा छ भन्न गाह्रो पर्छ। उनीहरुको उद्धेश्य समग्र वन क्षेत्रलाई कसरी देश र जनताको अधिकतम हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दा नीति तथा कार्यक्रममा आ-आफ्नो हित र स्वार्थ कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ केन्द्रीत भएको स्पष्ट देखिन्छ। मन्त्रालय पनि मोलमोलाईमा खसी काट्ने बगरेले जस्तो सबै सरोकारवालालाई चित्त बुझ्दो बिलो लगाउन लाग्छ जसका कारण मूल्य चुकाउनु पर्छ राज्य, समग्र वन क्षेत्र र सर्वसाधारण जनताले। विस्तृतमा
स्वर मिलाई भनौं- दलाल राजनीति!
अमित ढकाल - कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आइजिपी नियुक्तिका लागि आफू किन जयबहादुर चन्दको पक्षमा उभिएँ भनेर जमेर बहस गर्नुपथ्र्यो। त्यो राजनीतिक हुन्थ्यौं। त्यसको उल्टो देउवाले आइजिपी नियुक्तिमा आफ्नो हात नरहेको भन्दै वक्तव्य जारी गरे। बिपीले भनेको ‘भुइँफुट्टा’ आचरण यही हो।
सिके राउतप्रति तपाईँको धारणा के हो?
चरण प्रसाई - रावतको पृथकतावादी विचारको मानव अधिकारवादी कसैको पनि समर्थन छैन र हुँदैन पनि। जसले मानव अधिकारको आवरणमा उनको विचार बोक्छन् ती मानव अधिकारवादी हुन सक्दैनन्। तर जे–जस्तो कारणबाट गिरफ्तार भएपनि उनका व्यक्तिगत अधिकारको रक्षा कानुनतः राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो प्रत्येक व्यक्तिको आधारभुत मानव अधिकार पनि हो।
अहिलेको बैंकिङ समस्या कसरी सुल्झाउने?
महाप्रसाद अधिकारी - अर्थतन्त्रमा तरलताले निम्त्याउन सक्ने नकारात्मक असरलाई दृष्टिगत गरी सरकार र राष्ट्र बैंकले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्ने गरी कार्यक्रमको तयारी गर्नु आवश्यक भइसकेको छ। संकट परेर लगानी गर्दा हुनसक्ने राष्ट्रिय नोक्सानी र सुधारको लागि हुने खर्च हिसाबै गर्न सकिन्न। यसर्थ, यसको तयारी अत्यावश्यक देखिन्छ।
देशका आधाभन्दा बढी जनता रुवाउने प्रस्ताव किन ल्यायो सरकारले?
रामेश्वर खनाल - चुरेमै उत्पन्न हुने करिब १६९ नदीमध्ये ६१ नदीमा हामीले ढुंगागिट्टी झिक्न क्षेत्र छुट्टयाइदिएका छौं। उत्खनन् क्रममा झेल होला भनेर कति तहसम्म ढुंगागिट्टी थुप्रिए निकाल्न पाइन्छ भनी चिह्न लगाइदिएका छौं। क्रसर उद्योगलाई मात्र लाभ हुने गरी मापदण्ड नै संशोधन गर्नु आवश्यक छैन।...ढुंगागिट्टी अभाव छ र यसले विकास–निर्माण प्रभावित हुनसक्छ भन्ने तर्क म जायज देख्दिनँ। उहाँहरूले भनेझैं स्वदेशमा ढुंगागिट्टी अभाव भएर विकास–निर्माण प्रभावित हुने स्थिति आएको हो भने निकासी खुला गरेर झन् अभाव हुने स्थिति किन ल्याउनुपर्यो? यी दुवै तर्क आपसमा मिल्दैनन्।
पुँजी बढाउने दबाबले बैंकहरुमा विकृति थपियो
शोभनदेव पन्त - सरकारले खर्च गर्न नसक्दा समस्या आएको बैंकहरूको भनाइ छ। यो सत्य होइन। लक्ष्यअनुरुप सरकारी खर्च हुन नसकेको यो पहिलोपटक होइन। गत वर्ष यस्तै थियो, त्योभन्दा अगाडि पनि यस्तै थियो। उनीहरूको तर्क मान्ने हो भने त पोहोर र परार पनि पैसा अभावको समस्या हुनुपर्थ्यो। तर, समस्या यसपालि मात्र देखियो, किन?
त्रिपालले दिएको पीडा
अर्जुन कार्की, सचिव - मेरो विनम्र अनुरोध छ, तत्कालिन विद्यमान परिस्थितिमा र सीमाहरुको बिचमा सचिवको हैसियतले मैले गर्न सक्ने निर्णय, मैले गरेको निर्णय भन्दा अर्को के हुन सक्दथ्यो, कसैले भनिदेओस् । कसैले मेरो निर्णयले कहाँ, कसरी र कति भ्रष्टाचार भयो भनिदेओस्, म हदैसम्मको सजाय भोग्न तयार छु। तर यदि म त्रिपाल खरिदमा निर्दोष छु भने, विगत २० महिनादेखि मैले र मेरा ती तीन सहयोगीले भोगेको पीडा र अपमानको क्षतीपूर्ति के हुनुपर्ने र कसले भुक्तान गर्ने? यसको उत्तर मैले भगवानमाथि छोडिदिएको छु।
के सबैलाई समान रूपले धनी बनाउन सकिन्छ?
मुराहरि पराजुली - समानता अवसरमा खोज्नुपर्छ, नतिजामा होइन। नतिजा कहिल्यै पनि समान हुन सक्दैन। गरिबी र असमानता फरक कुरा हुन्। धनी बन्ने अवसरमा सबैको समान पहुँच बनाउन सकिन्छ, सबैलाई समान किसिमले धनी बनाउन सकिदैन।
किरात र दलित सौन्दर्यशास्त्र
आहुति - त्यही चिजलाई उत्पीडक वर्गले सुन्दर देख्छ भने त्यही चिजलाई उत्पीडित वर्गले सुन्दर मान्दैन वा सुन्दर देख्दै देख्दैन। जस्तो कि काम गरेर खानुपर्ने श्रमीक वर्गका मान्छेहरु हृष्टपुष्ट शरीरलाई सुन्दर देख्दछन्। किनभने त्यो वर्गले काम गरेर खानु छ, श्रममा बाँच्नु छ। तर, काम नगरी खाने मूलतः बसिखाने वर्गले चाँही एकदम स्लिम शरीरलाई राम्रो देख्दछ। किनकि, उसको त्यहाँ कामसँग सम्बन्ध हुँदैन। यसरी संस्कृतिसापेक्ष वा वर्गसापेक्ष र कतिपय मूल्यहरु प्राकृतिक वा भूगोलको बनोटसँग सम्बन्धित भएर पनि सौन्दर्य मूल्यहरु, सौन्दर्य दृष्टिहरु अर्थात् समग्र सौन्दर्य चेतना निर्माण हुन पुग्दछ। र, यो एक/दुई दिनमा बन्ने चिज होइन। यसको एउटा लामो प्रक्रिया हुन्छ।
विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप भइरहँदा पनि प्राज्ञिक क्षेत्र किन मौन?
केदारभक्त माथेमा - हाम्रा युवायुवतीमा आफ्ना अघिल्तिर भइरहेका घटनालाई गहिरिएर नियाल्न र विश्लेषण गर्न कठिनाइ पैदा गरिदिएको छ। प्रौढ अवस्थामा पुगेपछि पनि उनीहरुलाई न्यायोचित र मनासिब नलागेका कुरामा प्रश्न गर्ने आँट हुँदैन। सायद यही शिक्षा पद्धतिका कारण, केही समययता राज्यबाट गरिएको स्वीकार्नै नसकिने कार्य र गतिविधिप्रति हामीले खासै विरोध वा चासो नदेखाई टुलुटुलु हेरिरहेछौं, मानौं हामीले राज्यसँग स्कुलका शिक्षक तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसित जस्तै विमति राख्न मिल्दैन।
विश्वमा अब कुनै एक देशको दबदबा हुने छैन
जेफ्री डी. स्याक्स - उत्तर एट्लान्टिक राष्ट्रहरूको प्रभुत्व भएको विश्व इतिहास अब अन्त्य हुँदैछ। उक्त इतिहास कोलम्बसको अमेरिका यात्रासँगै सुरु भयो। जेम्स वाटको बाफशक्ति सँगसँगै त्यसले गति लियो। बेलायती साम्राज्यले सन् १९४५ सम्म त्यसलाई संस्थागत गर्यो र अमेरिकी शताब्दीसम्म त्यसले निरन्तरता पायो। अब भने इतिहासले बाटो बदलेको छ। अमेरिका अझै धनी र बलियो राष्ट्र हो, तर उसले अब विश्वभर प्रभुत्व कायम राख्न सक्दैन।
बैंकसँग पैसा नभएको होइन, खर्च गरेका हुन्
डा. युवराज खतिवडा - बैंकिङ क्षेत्रमा नाफामुखी प्रवृत्ति हाबी छ। कम समयमै प्रतिफल आउने अनुत्पादक क्षेत्रमै उनीहरू रमाइरहेका छन्। त्यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरूबीच घाँटी रेट्ने प्रतिस्पर्धा छ। उहाँ भने एक वर्ष मुद्दति खातामा पैसा राख्दासमेत ५ प्रतिशत व्याज पनि दिँदैनन्, मोटरगाडी किन्न चाहनेलाई भने ५ प्रतिशतमै कर्जा दिन तयार हुन्छन्। यो बैंकिङ क्षेत्रले थेग्न सक्ने कुरै होइन।
अस्वाभाविक रूपमा बढेको कर्जाको माग विश्लेषण नगरी मागेजति कर्जा दिनुपर्छ भन्ने बैंकहरूको मानसिकता देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकले पनि कर्जाको प्रवृत्ति तथा गुणस्तर विश्लेषण नगरी तरलता प्रवाह गर्न खोज्नु हिजोको समस्याको पुनरावृत्ति हुनसक्ने अवस्था हो। त्यसैले, कर्जाको गुणस्तर अहिले मुख्य चिन्ताको विषय हो।
मधेश बिद्रोहको दश वर्ष
दिपेन्द्र झा - संविधान संसोधन भनेको बिद्यमान ब्यवस्थालाई स्थिरता र निरन्तरता दिने हो। संशोधन भनेको असन्तुष्ठीको सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया मात्र हो, चित्त बुझाउने मेसो हो। तपाईँहरूले संशोधनलाई इन्कार गरिरहनुभयो भने, एक दिन मधेसले पनि भन्नेछ, हामीलाई पनि संशोधन चाहिन्न, यो संविधान नै चाहिन्न। त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि आउने असन्तुष्टिको ज्वारभाटाले संविधान मात्र हैन धेरै कुरा फेर्छ। संशोधन अस्वीकार गरेर एमालेले खोजेको त्यही हो? Comments
भुइँचालोले थेग्ने घर कसरी बनाउने ?
डा. गणेशराम न्हेमाफुकी - दुई वटा घर आपसमा ठोक्किएर केही ढल्किएका उदाहरण पनि छन्। केहीमा चिरा पनि देखिएका छन्। त्यसकारण आफ्नो घर मात्र सुरक्षित भएर हुँदैन, लहरै बनेका घरसँग जोर्नी पनि राख्नुपर्छ। लहरै बनेको घरमा जोर्नी राख्न नसकिने अवस्थामा कमसेकम सँगै रहेका घरका आकारप्रकार बनौट, घरको उचाइ, प्रत्येक तल्लाको उचाइ र सकेसम्म चौडाइ पनि उही भए राम्रो हुन्छ। ताकि, सबै घरको हल्लाई एकै किसिमको होस्।
जीवन क्षेत्री - राम्रो डाक्टर बन्नका लागि सही प्रोटोकलमा बिरामीको उपचार गरेर व्यवहारिक रुपमा सही सिकाइ गर्ने मेडिकल स्कुलहरु जति आवश्यक छन्, अरु पेशा झैं डाक्टरीमा पनि आवश्यक हुने नैतिकता र मानवीयता समाजमा आम रुपमा हुनु उति नै आवश्यक हुन्छ किनकि डाक्टर बन्न जानेहरु पनि हाम्रो समाजबाटै बन्ने हुन् र तिनको नैतिक ब्रम्हाण्ड मेडिकल कोर्समा भर्ना भएपछि बन्ने हैन।
दिपेन्द्र झा किनमेल विजुली, व्यवस्थापन र नेतृत्वले जागेका सरकारी सिमेन्ट उद्योग
चालु आर्थिक वर्षमा स्थापनाको इतिहासमै पहिलोपटक उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले नाफा आर्जन गर्यो। पूर्ण सरकारी स्वामित्वको यो उद्योगले स्थापना भएदेखि पहिलोपटक ...
भ्याटको लफडाले रोकियो खानेपानी संस्थानको जार पानी बेच्ने योजना
ग्लोबल एनआरएनको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा भूमिका हुन्न?
देशले निर्वाचनको एउटा ‘कोर्श’ पुरागरिसकेको यस अवस्थामा जनप्रतिनिधिसहितको स्थानीयतहको विकास निर्माण कार्यमा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)...
मेरो कलमको कथा
कला रेखा र आर्यनको ‘रुद्रप्रिया’को छायांकन सुरु
रेखा थापा र आर्यन सिग्देल स्टारर फिल्म ‘रुद्र प्रिया’ को बिहिबारदेखि बन्दिपुरबाट छायाँकन सुरु भएको छ । त्यहाँ रहेको खड्गादेवी मन्दिरमा पूजाआजा गर्दै फ...
यस्ता छन् थपिएका २२ स्थानीय तह सीमासहित
नेपालमा भद्र सहमतिको शृंखला यस्तो छ
सफल प्रधानमन्त्रीको रुपमा विदा
कश्मिरमा तीन गोर्खा सैनिकको मृत्यु
गाईको भोट हलगोरुलाई!
भोटोसँग किन देखाइन्न अनमोल गहना ?
कसले राख्यो सगरमाथामा दलाई लामाको तस्बिर?
उपत्यकामा एमालेको ५३ प्रतिशत वर्चश्व, ०५४ को निर्वाचनभन्दा सुदृढ
थपिएका तहमा तेस्रो चरण